Akaebe | Importgbọ M Mbubata
Ndị Mbubata hicgbọala n'widewa Niile Bubata ndị ọkachamara Nyocha IVA zuru ezu Cargbọ ala gị ga-ekwenye kpamkpam na UK Afọ 30 nke Ahụmịhe Mara, Ọkachamara na Oru. 4000 + arsgbọ ala batara Site na Supercar ka Supermini - Anyị Bụ Ọkachamara!
Ihe ndi ahia anyi kwuru
Ingbubata ụgbọ ala LHD na UK na ịnwe usoro iji aka gị rụọ ọrụ nwere ike ịdị nfe ruo mgbe m ghọtara na ọnụọgụ uhie na-acha uhie uhie nwere ike ime ka nke a bụrụ ihe nro. Nnyocha ngwa ngwa na broughtntanetị welitere ọtụtụ ụlọ ọrụ Britain ndị ọkachamara na ụdị ọrụ a. Di na nwunye m kpọtụrụ aha agaghị enye atụmatụ nke ego a ga-akwụ iji mezuo mgbanwe dị iche iche iji rube isi n'iwu UK, ihe egwu m adịghị njikere ịnakwere. Ọ dabara nke ọma na achọtara m Mbubata Cargbọ M ma site na mgbe m kpọtụrụ ha, amaara m na achọtala m ndị ziri ezi. N'ime nkeji ole na ole m kpọrọ oku a, enwetara m atụmatụ zuru ezu na ego m nwere ike ịgụnye, yabụ m kpebiri ịga n'ihu. Mgbe m nyefere ụgbọ ala m na isi ha dị na Castle Donington dị nso na Derby, achọpụtara m na emeela m nhọrọ ziri ezi ebe enwere Ferraris atọ na otu Rolls Royce na mbata ha, ụlọ ọrụ maka Toyota RAV4 dị obere. Emechara ọrụ niile na usoro eji arụ ọrụ n'ime izu atọ a gwara m, ụgwọ a ga-akwụ dịkwa ka atụmatụ mbụ. Mana ihe karịrị ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ihe kacha masị m bụ enyemaka na arụmọrụ nke ndị ọrụ ahụ.
Daalụ Will na ezigbo ndị otu gị!
Jimmy Cornell kwuru
Adị m ibubata ọtụtụ ụgbọ ala si Andorra na UK.
N'ịchọta ịntanetị, e nwere ọtụtụ ndị a na-akpọ ndị ọrụ mbubata ọkachamara, ndị na-etu ọnụ na ha nwere ike ịnagide akụkụ ọ bụla nke usoro ahụ, site n'ịhụ na nhazi mbupụ ziri ezi n'akụkụ niile nke usoro mbubata: VAT, mgbanwe na UK Nkọwapụta, MOT, ndebanye aha, nzere na nnweta na Andorra na UK. Oku abuo m kpọrọ oku gosipụtara na olile anya mana, mgbe ọtụtụ ụbọchị nke ịkpọ oku ekwentị na ịchụso na-adịghị agwụ agwụ, mechara nwee nkụda mmụọ. Na ihu ọma, nnwale nke atọ m mere ka mụ na Will Smith nke ụgbọ ala m bubata.
Ihe niile mgbe nke ahụ dị mfe ma bụrụ 'ụgbọ mmiri doro anya'. Ha lekọtara akụkụ ọ bụla nke ihe nwere ike ịbụ usoro mgbagwoju anya - site na ahụmịhe nke aka m, amaara m na otu onye ọrụ kọstọm na-enweghị isi, ma ọ bụ otu obere nsogbu na mpempe akwụkwọ, na oke Andorra / Spanish, nwere ike ibute ọgbaghara. Kaosinadị, mbubata ụgbọ ala m na nkọwapụta zuru oke hụ na enweghị ụdị ọgbaghara ahụ.
Vehiclegbọ ala ọ bụla chọrọ mgbanwe ole na ole, na otu ụgbọ ala na mberede mepụtara ihe mgbagwoju anya nke injin. Ha lebara anya ma mezie nsogbu ahụ niile.
Ihe niile mere ngwa ngwa karịa ka m tụrụ anya ya na n'ụzọ doro anya, karịa akụ na ụba karịa ka m tụrụ anya ya. Ọbụna ha na-enyere m aka ịre ọmarịcha Honda Goldwing 2006 m!
Ụlọ ọrụ LHD Campervan
Ọ ga-amasị m ịkele gị maka enyemaka gị n'ịdenye aha ụgbọ ala anyị - ọkachasị campervan, dịka m chere, ọ bụghị nke kachasị mfe!
Daalụ otu oge
Jisie na ahia gi
Onye na -enyocha Lincoln
Naanị ihe edeturu iji kwuo Nnukwu Daalụ maka gị na ndị ọzọ niile.
Enwere m nchegbu banyere ụgbọ ala, echere m na ị maara nke ahụ !!
A ga-agwa taa na ọ bụ site na ule IVA bụ naanị akụkọ kachasị mma.
Daalụ ọzọ, i meela nnukwu ọrụ, m na-atụ anya ikwu okwu na ịhụ gị niile
Robert Corke kwuru
Achọrọ m ide iji kelee gị na ndị otu gị na MyCarImport maka ọmarịcha ọrụ ị meere anyị. Ọrụ niile abụrụla nsogbu kpamkpam na Sydney ruo Castle Donnington. Anyị ga-akwado ọrụ gị na onye ọ bụla. Daalụ ọzọ!
Jaguar E 3.8.dị XNUMX
Thegbọ ala ahụ rutere n'ụlọ m n'ụtụtụ a, ọ na-ada ụda na-ada ụda. Oge dị ukwuu.
Ọ masịrị m ikele gị niile maka enyemaka na enyemaka na mbupu, ụgbọ njem, ndebanye aha UK wdg. Ihe niile gara nke ọma n'enweghị nsogbu na n'ezie ọsịsọ.
M ga-eji obi ụtọ kwado gị niile nye ndị ọzọ!
Echiche kacha mma
Aha ya bụ Henrik
Ekele dịrị gị na ndị otu gị niile maka ihe ị meere m. Daalụ nke ukwuu na m ga-emekwu azụmahịa gị, ọtụtụ ekele.
Usoro 1 Land Rover
Ejiri usoro zuru ezu nke mbubata 2016 Porsche GT3RS m, site na nnyefe, na-eme ka ụgbọ ala ahụ kwekọọ na ndebanye aha UK na ọsọ na arụmọrụ. Ha mere ka m mara ma melite usoro ọ bụla nke ụzọ m masịrị m karịa! N'uche m, nke a bụ naanị ụlọ ọrụ ịkpọ oku iji hazie mbubata ụgbọ. A ekele dị ukwuu nye Will na ndị otu maka ịrụ ọrụ dị egwu a, m ga-azụkwa gị ọzọ n'ọdịnihu dị nso.
Jeremy Wicks kwuru
Porsche 718 Cayman UAE na UK
Daalụ maka enyemaka gị ị nweta 718 Cayman m, aga m akwado gị ndị enyi na-eche maka ibubata ụgbọ ala ha na UK.
2016 Audi RS3 - Australia gaa UK
Daalụ ọzọ maka ị nweta ụgbọ ala m site na Australia.
Daalụ maka ịrụsi ọrụ ike gị niile.
Audi RS3 Australia na UK
2013 Audi A3 - Republic nke Ireland
Enwere m ike ikwenye na akwụkwọ niile na epekele ndị ahụ erutela.
Ugbu a, mgbe emechara nke a ngwa ngwa, enwere m ike ịkele gị maka ọrụ pụrụ iche, pụrụ iche.
Ana m ekele gị ọzọ.
Abụ m ngọngọ ederede ederede. Pịa bọtịnụ edezi iji gbanwee ederede a.
Lexus B F - Saudi Arabia
Naanị ịnata ụgbọ ala ahụ, ihe niile dị mma. Ana m ekele gị ọzọ maka ọrụ dị ịtụnanya, ị meela ndụ m ka ọ dịkwuo mfe ma na-agwa ndị ọzọ ụlọ ọrụ gị.
Naanị ozi ngwa ngwa iji kwuo ụdị ọrụ dị mma.
I jizi aka mee ihe niile nke ọma. Mgbe ị hụrụ ihe ndị chọrọ DVLA chọrọ, ọ bụ nnukwu nnwere onwe inyefe ya n'aka gị ma mee ya nke ọma.
Honda Jazz - Ọhụrụ
Naanị m chọrọ ịkele gị na ndị ọrụ gị maka iweghara ihe ghọrọ m ihe ịma aka nye m ịkpọbata ụgbọ ala m na UK. Ahụrụ m mgbasa ozi gị na ịntanetị ma gụọ ihe akaebe na presto n'ime ụbọchị ole na ole ịgwa gị okwu, My Car Import nwere ihe na-aga n'ihu.
M na-arịọ onye ọ bụla ka ọ tụlee tupu ya ebufee ụgbọ ala ha na UK - iku My Car Bubata iji bulie na Port ma mesoo ihe ndị gọọmentị UK chọrọ. Ha dị mma.
Nissan Navara - South Africa
Aghọtara m na ọ bụ ezie na ụgbọala m abụghị otu otu njikọ ego ahụ dị ka ndị gị na ha na-arụkarị, o doro anya na ọ nwetara otu nlekọta na nlebara anya kwesịrị ekwesị.
Daalụ gị, papa gị na Jade maka nlekọta na nlebara anya m natara n'oge usoro a.
Site na nzaghachi mbụ m jụrụ site na webụsaịtị gị site na nnyefe nke ụgbọala ahụ, enweghị m ike inwekwu ọ andụ ma ga-eji obi ụtọ jiri gị ọzọ wee ziga gị ndị enyi.
2015 Mitsubishi Pajero - Dubai na UK
2015 Kia Picanto - Ireland na UK
Daalụ nke ukwuu maka ịhazigharị ọsọ ọsọ m na iweta ụgbọ ala m. Enwere m ekele maka mbọ niile ị gara. Daalụ maka ọrụ magburu onwe ya!
Suzuki Grand Vitara - NL na UK
Efere ahụ eruola ma ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ ugbu a na iwu. Ekele dịrị gị na ụlọ ọrụ maka ọrụ pụrụ iche.
Daalụ maka ilekọtara mbubata ụgbọ ala m. Amaara m na ọ bụ ihe ịma aka siri ike, mana ekele ndị kọntaktị gị nwere ike inweta akụkụ ndị ziri ezi ma dozie nsogbu niile n'egbughị oge na afọ ojuju. Agaghị m ala azụ ịkwado ọrụ gị.
NT VKWU HLỌ
2015 VW Multivan -Australia na UK
Daalụ nke ukwuu maka ịhazi ihe niile maka m, enweghị m ike iche n'echiche etu o siri sie ike ma ọ bụrụ na m ga - edozi ihe niile n'onwe m. A na - edozi mkpuchi m niile na ihe niile dị mma. Daalụ.
I meela nke ukwuu maka ịhazi ụgbọ ala m, mbadamba efere, mkpuchi etinyere ma ana m esoro ya n'okporo ụzọ ọzọ, obi dị m ụtọ. Daalụ, nnukwu ọrụ,
Ọ ga-amasị m ịkele gị maka nnukwu ọrụ, aga m akwado gị ka ị nwee ndị enyi ọ bụla kpebiri ibute ụgbọ ala ha n'ọdịnihu!
Daalụ Jack, enwere m obi ụtọ na enyemaka na ọrụ gị niile.
Sydney - Typedị
Ọdịdị ụlọ ahụ bụ ụlọ, biri n'ime afụ ya mere ọtụtụ narị kilomita ma gaa ememme Goodwood nke ọsọ ma kpata ọgba aghara na VIP ụgbọ ala. Daalụ maka ị nweta Jack na-enweghị mmerụ, enwere m ekele maka ya.
Daalụ maka nnukwu ọrụ enyere.
Daalụ nke ukwuu maka enyemaka gị, ọ bụ ihe ọ pleasureụ ịnagide gị.
Na ekele gị ma Jade na Jack maka ihe niile! Have dịwo ukwuu na usoro ahụ ma mee ihe malitere dị ka usoro nrụgide na-adị mfe ma dịkwa oke ọnụ. Ga-eji obi ụtọ kwado gị ọzọ nye onye ọ bụla m maara na ọ dị mkpa maka ọrụ gị!
UTOM VAN EEDEN
Naanị ngwa ngwa iji kwuo ekele. Enwere m nchegbu na mbụ ibubata ihe na ndị ọzọ na-ebugharị m gwara m okwu ihe niile. Site na kọntaktị mbụ m ruo na nnyefe n'ụlọ ị mere ka ọ dị mfe ma rụọ ọrụ ahụ dum maka ezigbo ọnụahịa. Enweela m nsogbu karịa ị nweta ụgbọ ala na UK!
Naanị otu akara iji kelee gị niile maka ọrụ dị egwu ị mere n'ịbubata ụgbọ ala m na UK. Agaghị m eme ya ma ewezuga gị. Ekele m amaghi oke. Obi dị gị ezigbo ụtọ na ndidi gị na enyemaka gị niile. M ga-akwado ụlọ ọrụ gị nke ukwuu maka ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m chọrọ ọrụ mbubata ụgbọ ala.
PAULINE AKW .KWỌ
Naanị ịsị nnukwu ekele maka enyemaka niile na mbubata, enwere m ekele nke ukwuu na m ga-agbasa okwu ahụ.
Daalụ maka ọrụ gị niile - a na-ekele ya nke ukwuu ma ị dozie ọtụtụ nsogbu. Obi dị m ezigbo ụtọ ịnwe ụgbọ ala m ịnya ụgbọ ala na mba a.
AKW HEKWỌ HEVIA
Italy - Honda ọgba tum tum
“Ana m ekele gị ọzọ maka ọrụ dị oke egwu enyere ya bụ usoro enweghị nchekasị. Agwaara m ndị ọrụ ole na ole ndị ọzọ nọ n'otu ọnọdụ m ahala ụlọ ọrụ gị, ha nwere ike weghaara gị ọrụ iji gbanwee efere ndebanye aha ha. ”
“Anyị enweghị ike ịkwado My Car Import nke ukwuu. Na mbụ, anyị chere na ịkpụzi Kia Sedona anyị maka ịnya ụgbọ ala n'okporo ụzọ ndị Britain bụ okwu nke ị nweta ndetu mkpuchi ọsọ ọsọ, ịhazigharị ọkụ ọkụ na ịbanye n'ahịrị iji nweta ndebanye aha UK na mpempe akwụkwọ. Kedu ka anyị si hie ụzọ, ezigbo ọgụ bụ ụgbọ ala na ndị ọrụ ndị ọrụ (VOSA). Onye na-ere ahịa Kia na-eme ihe kachasị mma, site na ịnye iji dochie igwe ọkụ ọkụ niile (maka £ 400) mana nke ahụ hapụrụ otu waya na-agbanye, nke a na-agaghị ekwe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na etinyere ya. O zigara anyị n'otu obere ụgbọala nke dịdebere ọdụ ụgbọ elu US Air Force, bụ nke e ji emegharị ụgbọala North America, mana ha akwụsịla, n'ihi nkwụsi ike VOSA na iwu na-agbanwe mgbe niile. Ha gosiri anyị Jack, na ụgbọ ala m na-ebubata. Ọnwa abụọ ruo ụbọchị mgbe anyị nakọtara ụgbọ ala anyị na Liverpool ọdụ ụgbọ mmiri, Jack mere ka ọ dị njikere maka anyị, UK-aha, VOSA-mma na ikikere. Ọrụ Jack Charlesworth nyere anyị enweghị atụ. ”
REVD MICHAEL SKLIROS
“Jade Williamson na ndị otu na My Car Import tinyere aka mbubata nke Landrover m na oke ọrụ na arụmọrụ. Enwere m nnukwu ekele maka enyemaka na enyemaka dị oke mkpa ha nyere ha ka ha jisiri ike mee ka ogologo usoro nke mbubata yie ihe na-enweghị isi. Onye mbubata mbata nke m gaara achọ ịchọ ma uru dị ukwuu ya bara! ”
“N'oge na-adịbeghị anya anyị si Belgium bịa biri na UK. Anyị chọrọ ịdebanye aha ụgbọ ala anyị Belgium na UK, anyị gbalịrị ịmalite usoro ahụ n'onwe anyị. Agbanyeghị, anyị zutere ọtụtụ ihe isi ike n'ụzọ anyị hapụrụ. Mgbe ahụ anyị nwere echiche ịgbazite ụgbọ ala Mbubata iji mee usoro ahụ n'aha anyị. Importgbọ M Mbata mere ka anyị kwuo okwu ọnụ wee kwupụta nke ọma akwụkwọ ndị achọrọ maka usoro ahụ. Ndị ọrụ ahụ na-aza ajụjụ anyị niile site na email ma ọ bụ site na ekwentị na enyi na enyi. Emechara usoro niile ngwa ngwa na anyị tụrụ anya ya: ọnwa abụọ ka anyị kpọtụrụ My Car Import, anyị natara akwụkwọ ndebanye aha site na DVLA. Na mkpokọta anyị nwere obi ụtọ na ọrụ anyị natara n'aka My Car Import. ”
Spain - VW goofu
Achọrọ m ide na ekele maka ụzọ dị mma nzukọ gị siri mee maka mbubata ụgbọ ala m. Ndị ọrụ gị nyere aka ma nwee mmekọrịta enyi na mgbanwe iji zute mkpa anyị. Daalụ maka enyemaka gị, agaghị m ala azụ n'ịtụ aro ka ị bụrụ ndị ọzọ. ”
"Naanị ịchọrọ ịsị nnukwu ekele maka enyemaka gị niile iji mee ka Duchess 'Audi si New Zealand gaa Woburn, kelee gị maka ịnagide ọtụtụ ajụjụ m niile, ozi ịntanetị na oku ekwentị !!"
“Achọrọ m iji ohere a na-ekele gị na ndị otu gị maka ọrụ dị oke elu enyere m maka mbubata ụgbọ ala m abụọ. Nrụpụta, arụmọrụ na ọfụma bụ ọkọlọtọ nke anaghị ahụkarị taa. Echere m na ịbubata ụgbọala ndị ahụ ga-abụ ezigbo ihe ịma aka - karịsịa ebe m gafere na weebụsaịtị DVLC! Ya mere, ọrụ njedebe nke MCI nyere nnukwu nnwere onwe na karịa ihe m tụrụ anya maka ihe m chere na ọ bụ ezigbo ego. Agaghị m ala azụ n'ịkwado ndị ọzọ MCI. ”
Onye osote onyeisiala - Shell Global Trading
“Achọrọ m ịkele gị na ndị otu gị maka enyemaka gị n’enweghị ume ọ bụla na ibubata Land Cruiser m na Finland. Echere m na m ga-enwe nsogbu ma usoro ahụ niile agara n'enweghị nsogbu ma ọ bụ ụgwọ dị ukwuu maka ekele gị. M ekemende zụta na ere ụgbọala site na gị na ihe niile e si mesoo na kasị ike ọkachamara n'ụzọ na magburu onwe mgbe ahịa. Agaghị m enwe ihe ọ bụla ma ọlị n'ịkwado gị na ndị otu egwuregwu, n'ezie, m na-atụ anya iso gị nwee azụmaahịa n'ọdịnihu. ”
“Car na-ebuga n’udo n’elekere 12.30:XNUMX nke ehihie taa daalụ. John na Maria tụrụ ụjọ! Anọ m na-ata ahụhụ na diski gbapụrụ agbapụ kemgbe izu isii gara aga yabụ enweghị ike ime ọtụtụ ihe iji nyere aka. Ha doziri ihe niile. Wheelskwụ anọ ahụ nwere taya dị larịị ka ha wee jiri nwayọọ gbaghaa elu atọ wee gbanwee nke anọ maka oghere ụkwụ m nwere. Ha bupụrụ ụgbọ ala ahụ tinye m n'ụgbọala. Ha niile na-enye aka. Unu emeela nke ukwuu maka ọrụ magburu onwe ya. ”
DAVID NA-agba ịnyịnya